Om Covid-19 - somaliska
Waxa Covid-19 keena fayrus. Dadka covid-19 qaaday badankoodu waxay u xanuunsadaan sida hargabka oo kale. Dadka qaar ayaa aad u jirada oo daryeel cisbitaal u baahda.
Waxa cudurka covid-19 keena fayrus ka mid ah kooxda fayruska Korona.
Waxa cudurka laga helay meelo badan oo dunida ka mid ah. Sababtaas darteed ayaana cudur aafo ah loogu yaqaanaa.
Gobolka bogga xagiisa sare ka dooro si aad ugu hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa halkaad joogto khuseeya
Du kan läsa texten på svenska här
Waxa jira tallaalo loogu talogalay covid-19. Waxa uu tallaalku kaa difaacayaa inaad si xun covid-19 ugu jirato.
Calaamadaha covid-19 ka
Waxay dadka badankoodu covid-19 u dareemayaan sida hargab caadi ah ama sida saf/duray oo kale.
Dadka intooda badan waxay ka bogsadaan qiyaastii toddobaad ka dib. Dadka qaarkood muddo ka sii badan ayay u jiradaan
Kuwani waa calaamadaha covid-19 u caadiga ah:
xanuun cunaha ah
duuf ama sanka oo ku xidhan
isbedel urta iyo dhadhanka
xanuun caloosha ah
neefsashada oo kugu adkaata
Dadka qaar ayaa aad u jirada
Dadka qaar aad ayey u jiradaan qiyaas ahaan hal todobaad ka dib. Waxaad markaas yeelan kartaa in naqasku ku qabto oo daciif badan oo jidhka ah la dareemo.
Khatarta in covid-19 si xun loogu xanuunsado ayaa aad ugu sareysa dadka 70 jir ka weyn.
Cudurada qaarkood ayaa sidoo kale sii kordhin kara khatarta in si xun loogu jirado.
Qaadista tijaabada covid-19
Waa muhiim inaad guriga joogto haddii aad xanuunsaneyso. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad tijaabo dhiibtid/iska qaadid si aad ugu ogaato inaad Covid-19 qabtid. Tijaabada iyo shaybaarku waa isku mid.
Goorma iyo xaggee ayaan daryeel ka raadsanayaa?
Dadka covid-19 qaaday badankoodu uma baahna inay daryeel caafimaad raadsadaan. Cudurku isaga ayaa badanaa kaligii iska taga.
Wac lambarka 1177 haddii aad rabto in lagaa caawiyo waxay tahay inaad sameyso. Cidda ka jawaabeysaa waa kalkaalisooyin. Waxay sidoo kale adiga kaa caawin karaan halka aad daryeel ka raadsaneyso, haddii kaas loo baahdo.
Waxay kalkaalisadu ku hadashaa af Iswidhish iyo Ingiriisi. Mararka qaar ayay suurtogal tahay in caawimo lagu helo luqado kale.
Wac +46 771-11 77 00 haddii aad telefoon lambar wadanka dibadiisa ah ka soo hadlayso.
Haddii ay xaaladu degdeg tahay
Isla markaaba la soo xiriir rugta caafimaadka ama rugta caafimaadka ee heeganka ah/furan xilliyada ka baxsan saacadaha shaqada haddii aad qabtid mid ama wax ka badan oo dhibaatooyinka soo socda ah:
Inaad dhakhso uga sii jiratey.
Neefsashada ayaa kugu adag xitaa markaad nasaneyso.
Daryeel caafimaad ka raadso qeybta gargaarka degdega ah haddii aanay suurtogal aheyn in lala xiriio rugta caafimaadka ama rugta caafimaadka ee heeganku xiran tahay.
Sidan ayaa covid-19 loo kala qaadaa.
Waxa Covid-19 badanaa la kala qaadaa marka qof qaba cudurka uu hindhiso ama qufaco. Markaas ayaa dhibco yaryar oo fayrus wataa sameysmayaan. Waxaad qaadi kartaa haddii dhibcahaasi ay adiga ku dhex galaan.
Waxay dhibcuhu sidoo kale ku dhici karaan waxyaabo kala duwan. Markaad waxyaabahaas taabato ayuu fayrusku ku dhex gali karaa. Khatarta inaad kaas u jirato ayaa yar.
Qofka covid-19 qaba ayaa dadka kale qaadsiin kara xitaa haddii aanu dareemeynin inuu jiran yahay.
Sidee ayaan inaan qaado iskaga ilaalin karaa?
Is tallaal. Raac talobixinta dawladda xitaa marka lagu tallaalo ka dib.
Waa mid aad u muhiima ah inaad markaad uurka leedahay iska ilaaliso inaad covid-19 u jirato. Waxa lagugula talinayaa inaad is tallaasho.
Ilmaha ayaa xilli hore soo dhalan kara haddii aad covid-19 qaado inta lagu jiro wajiga/heerka labaad ee uurka.
Waxay noqon kartaa mid aad u adag in la jirado markaad uur leedahay.
Waxaad u baahan kartaa in ilmuhu uu qalliin ku soo dhasho haddii aad covid-19 u jirato.
Umulisadaada ama dhakhtarkaaga la hadal. Talo ayay ku siin karaan.
Qofka ilme naas nuujinaaya
Waxaad ilmahaaga naaska nuujin kartaa hadii aad covid-19 qabtid.
Waxaad talo iyo caawin ka heli kartaa rugta daryeelka carruurta (bvc).
Dadka badankood uma baahna in wax daaweyn covid-19 ah loo sameeyo. Waxa jira waxyaalo adigu aad sameyn karto si aad uga roonaato.
Dadka qaarkood waxay u baahan yihiin in cisbitaal lagu daaweeyo. Qofka cisbitaalka la keenay ayaa tusaale ahaan heli kara oksijiin si uu si ka wanaagsan ugu neefsado.
Dadka qaarkood aad ayey ugu jiradaan oo ay u baadaan in mashiinka neefta ka qaada lagu xidho. Markaas ayaa la suuxin doonaa. Waxaa loo yaqaan daryeelka dadka xaaladoodu khatarta tahay (intensivvård).